Mandray sidina vaovao avy amin'ny German Airlines Eurowings i Jamaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Mandray sidina vaovao avy amin'ny German Airlines Eurowings i Jamaika
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Voaravaka saina Jamaikana, ny Eurowings, ilay mpitatitra Eoropeana fahatelo lehibe indrindra, dia manao ny sidina voalohany avy any Frankfurt, Alemaina, mankany Montego Bay ao St. James. Tonga ny harivan'ny 3 Novambra 2021 ny sidina, nitondra mpandeha sy mpiasa miisa 211.
Nanao ny sidina voalohany avy any Francfort, Alemaina, ho any Montego Bay ao St. James, ny Eurowings, ny mpitatitra Eoropeana fahatelo lehibe indrindra, omaly hariva.
I Alemaina dia tsena matanjaka ho an'i Jamaika, izay misy mpitsidika 23,000 tamin'ny taona 2019 talohan'ny areti-mifindra.
Izany koa dia hanampy amin'ny iraka an'i Jamaika hampitombo ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy any Eropa, asehon'ny fahafahan'ny seza fiaramanidina eo anelanelan'i UK sy Jamaika ankehitriny amin'ny 100% amin'ny pre-COVID.
Jamaika dia misokatra ho an'ny orinasa ary toerana azo antoka miaraka amin'ny tahan'ny otrikaretina COVID manakaiky ny aotra ao amin'ny Koridor Resilient.
Fizahan-tany any Jamaika Minisitra, Hon. Edmund Bartlett, faly noho ny vaovao momba ity zotra fanampiny avy any Alemaina ity, dia nilaza fa tsy isalasalana fa hanamafy ny fifandraisan'ilay nosy amin'ny tsenan'i Eoropa izany.
“Tena faly tokoa i Jamaika nandray ny sidina fanokanana avy any Eurowings omaly hariva. Tena tsena matanjaka ho antsika i Alemaina, misy mpitsidika 23,000 avy amin'ny fireneny tonga eto amin'ny morontsiraka amin'ny taona 2019 talohan'ny areti-mifindra. Fantatro fa hitombo io tarehimarika io miaraka amin'ny sidina tsy an-kiato azo alaina avy any Eurowings sy Condor, ”hoy i Bartlett.
"Ity sidina avy any Alemaina ity dia hanampy amin'ny iraka ataontsika hampitomboana ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy any Eoropa, izay nandraisan'ny ekipako anjara mavitrika. Raha ny marina, ny fahafahan'ny seza fiaramanidina eo anelanelan'ny UK sy Jamaika dia 100% amin'ny pre-COVID. Te hanome toky ireo mpiara-miombon'antoka aminay sy ireo mpitsidika ho avy eto amin'ny nosy izahay Jamaika dia misokatra ho an'ny orinasa ary toerana azo antoka miaraka amin'ny tahan'ny otrikaretina COVID manakaiky ny aotra ao amin'ny Corridor Resilient, ”hoy izy.
Ny fiaramanidina Eurowings Discover, izay nanana mpandeha sy mpiasa 211, dia notsenaina tamin'ny tafondro rano tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sangster (SIA) rehefa tonga.
Noraisin'ny lefitry ny ben'ny tanànan'i Montego Bay, mpanolotsaina Richard Vernon, ireo mpandeha; Masoivoho Alemana any Jamaika, Andriamatoa Dr. Stefan Keil; Tale Mpanatanteraka ny Jamaica Vacations Ltd. Joy Roberts; ary Talen'ny Faritra ao amin'ny Birao Mpizahatany Jamaika, Odette Dyer.
Ny serivisy vaovao dia manidina indroa isan-kerinandro mankany Montego Bay, miainga ny alarobia sy ny asabotsy, ary manatsara ny fidirana amin'ny nosy avy any Eoropa. Zava-dehibe ny manamarika fa i Jamaika dia mikasa ny hahazo sidina tsy an-kiato 17 isan-kerinandro avy any Royaume-Uni. Fanampin'izany, ny zotram-piaramanidina fitsangatsanganana fialamboly Soisa, Edelweiss, dia nanomboka sidina vaovao indray mandeha isan-kerinandro ho any Jamaika raha ny Condor Airlines dia namerina indray ny sidina indroa isan-kerinandro teo anelanelan'i Frankfurt, Alemana ary Montego Bay tamin'ny Jolay.
Eurowings no orinasam-pitaterana an'ny Vondrona Lufthansa ary anisan'ny vondrona lehibe indrindra amin'ny sidina eran-tany. Miasa fiaramanidina 139 izy ireo ary manampahaizana manokana amin'ny sidina mivantana mora vidy manerana an'i Eoropa.